haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > fanamarinana
«Tsy maintsy nividy ny kiraro ny kiraro ary nahita azy ireo tamin'ny tolotra manokana. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny akanjo novidiko tamin'ny herinandro lasa teo ». "Tsy maintsy nanafaingana ny fiara aho teny amin'ny lalambe satria ny fiara ao aoriako dia nanainga ahy ary nanery ahy handeha haingana." «Nihinana ity mofomamy ity aho satria ny farany dia tsy maintsy nanisy efitra ao anaty vata fampangatsiahana aho». «Tsy maintsy nampiasa lainga fotsy kely aho; satria tsy te handratra ny fihetseham-pon'ny sakaizako aho ».
Vitantsika daholo izany. Nanomboka tamin'ny fahazazantsika izahay ary manohy manao izany rehefa olon-dehibe. Ataontsika izany isaky ny manao zavatra izay fantatsika fa tsy tokony hataontsika isika - zavatra tokony hahatsapantsika ho meloka. Saingy tsy mahatsiaro tena ho meloka isika satria mieritreritra fa manana antony tsara amin'ny zavatra ataontsika isika. Hitanay ny filàna iray nahatonga anay hanao izay - farafaharatsiny tamin'izany fotoana izany - toa ilaina izany, ary toa tsy nandratra olona koa izany. Antsoina hoe fanamarinana izy io, ary ny ankamaroantsika dia manao azy nefa tsy tsapantsika akory. Mety ho lasa fahazarana, fomba fisainana mety hanakana antsika tsy handray andraikitra amin'ny ataontsika. Matetika aho manamarina ny tenako rehefa manokatra ny vavako be aho ary miteny zavatra tsy tiana na manakiana.
Eny, miteny zavatra tsy tsara fanahy aho indraindray ary indraindray. Sarotra ny mifehy ny lela. Rehefa manamarina ny tenako aho dia (saika) manala ny heloko ary mamela ny tenako hanana fahatsapana afa-po fa nanampy ny nahazo ny hevitro hianatra sy hitombo ara-panahy aho.
Manamarina zavatra maro ho antsika ny fanamarinana antsika. Izy io dia afaka manampy antsika hahatsapa ho ambony kokoa amin'ny hafa. Afaka manaisotra ny helokantsika izy io. Manampy antsika hieritreritra izany hoe mety sy tsara ny zavatra nataontsika. Afaka manome antsika fahatsapana fiarovana fa tsy hiaina vokatra ratsy isika. Right? Wrong! Ny fanamarinanantsika manokana dia tsy manome tsiny antsika. Tsy manampy izany, manome antsika ny hevitra tsy mety hoe afaka miala amin'ny ratsy nataontsika. Misy fanamarinana manome tsiny antsika ve? Ny fanamarinan-tena eo imason'Andriamanitra dia mamaritra ny asa izay nataon'i Jesosy ho mpanota tsy marina.
Raha mahazo fanamarinana avy amin'Andriamanitra isika amin'ny finoana ary amin'ny alàlan'ny finoana fotsiny, dia manafaka antsika amin'ny fanamelohana Izy ary mahatonga antsika hankasitraka azy. Ny fanamarinan-dry zareo dia tsy mitovy amin'ny antsika manokana, izay anaovantsika manameloka ny tenantsika amin'ny fitondran-tena ratsy amin'ny antsoina hoe antony tsara. Avy amin'i Kristy ihany no fanamarinana marina. Ny fahamarinany dia ampanantenain'Andriamanitra ho toetra amam-panahy isika fa tsy anjarantsika.
Raha tena nohamarinina tamin'ny finoana velona an'i Kristy isika dia tsy mahatsapa intsony fa mila manamarina ny tenantsika. Miankina amin'ny finoana marina ny fanamarinan'Andriamanitra, izay tsy azo ihodivirana ary mitarika ho amin'ny fankatoavana. Ny fankatoavana an'i Jesosy Tompontsika dia ahafahantsika mahafantatra ny andraikitsika amin'ny toe-javatra toy izany, araka ny voalaza tetsy am-piandohan'ity lahatsoratra ity, mba hahafahantsika mahazo azy ireo. Ho fantatsika ny antony manosika antsika, handray andraikitra ary hanenina isika.
Ny fanamarinana marina dia tsy manome fihetseham-po diso, fa ny tena filaminanana. Tsy ho marina eo imasontsika izahay, fa eo imason’Andriamanitra. Ary izany no tsara kokoa.